टेलिकमको भ्वाइस सेवा: सस्तो देखि निःशुल्क कल सम्म, कसरी सुचारु गर्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more टेलिकमको भ्वाइस सेवा: सस्तो देखि निःशुल्क कल सम्म, कसरी सुचारु गर्ने ?
टेलिकमको भ्वाइस सेवा: सस्तो देखि निःशुल्क कल सम्म, कसरी सुचारु गर्ने ?
चैत २७ गते, २०७५ - १२:१२
काठमाडौं । करिव २० वर्ष अघि नेपालमा सेलुलर मोबाइल फोन बोक्ने मानिस एकजना पनि थिएनन्, तर आज बाटोमा निस्केर सोध्ने हो भने मोबाइल नबोक्ने मानिस एक जना भेट्न पनि मुश्किल पर्ला ।नेपाल टेलिकमले २०५६ साल बैशाखमा मुलुकमा नै पहिलोपटक जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसवेला मोबाइल सेवाको मुल्य तुलनात्मक रुपमा महंगो पर्ने भएकाले शुरुका केही वर्षसम्म यस सेवाका ग्राहकहरु पनि थोरै थिए । सेवाको विस्तार पनि सीमित थियो । २०६० सालसम्म पनि नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक आधार ४ लाख २२ हजार मात्र थिए ।
प्रविधिमा भइरहेको विकाससँगै नेपाल टेलिकमले २०६४ ज्येष्ठ देखि परीक्षणका रूपमा तेस्रो पुस्ताको 3G मोबाइल सेवा वितरण आरम्भ गरेको थियो । 3G मोवाइल सेवा दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक नेपाल टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याएको हो ।२०७३ असोजमा यो सेवाको पहुँच पनि ७५ वटै जिल्लामा पु¥याइएको थियो । यसका साथै मुलुकमा पहिलोपटक 4G सेवा भित्र्याउने श्रेय पनि नेपाल टेलिकमलाई नै प्राप्त भएको छ । २०७३ पौष १७ गते देखि नेपाल टेलिकमले चौथो पुस्ताको मोबाइल 4G (LTE) सेवा पनि सञ्चालन आरम्भ गरिसकेको छ । अव एक वर्षभित्रमा मुलुकभर 4G (LTE) मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सम्झौताहरु भइसकेका छन।
यस अन्तर्गत जीएसएम÷सीडीएमएका प्रिपेड ग्राहकले कम्पनीको नेटवर्कमा २०० रुपैयाँमा ६५ मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा १२५ एमबी डाटा चलाउन र २५ वटा एसएमएस पठाउन सक्ने सुविधा छ । यसैगरी जीएसएम/सीडीएमए पोष्टपेड/प्रिपेड ग्राहकका लागि ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँ दरका विभिन्न ग्रुप बनाइएको छ । यो ग्रुपमा रहेका सदस्यहरुले एक अर्कामा असीमित कल गर्न बाहेक अन्य नम्बरमा विभिन्न दरको भ्वाइस कल गर्न, डाटा चलाउन र एसएमएस गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्छ । कम्पनीको वेबसाइटwww.ntc.net.np मार्फत पनि यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यससम्बन्धी जानकारी लिन तथा प्याकेज खरिद गर्न सकिन्छ ।
चैत २७ गते, २०७५ - १२:१२ मा प्रकाशित